Ukuhumusha - I-Word Foundation • Isingeniso ekucabangeni nasekubhujisweni
Siyajabula ukukunikeza ukuhumusha okuzenzakalelayo kwako konke okuqukethwe kwe-HTML kuwebhusayithi yethu. Ukuhumusha kwenziwa yikhompyutha futhi kuyatholakala ngezilimi ze-100. Lokhu kusho ukuthi yonke imisebenzi kaHarold W. Percival manje isingafundwa ngabantu abaningi emhlabeni ngolimi lwabo lwendabuko. Izinhlobo ze-PDF zezincwadi ze-Percival neminye imibhalo yakhe zihlala zingamaNgisi kuphela. Lawa mafayili ayizimpendulo zemisebenzi yasekuqaleni, futhi lolu hlobo lokunemba alulindelwe ezinguqulweni ezizenzakalelayo.
Ekhoneni elingezansi kwesokudla kwekhasi ngalinye, kukhona okhethiwe wolimi ozokuvumela ukuba uhumushele ikhasi olimini olukhethile:
Ngokuchofoza okukhethiwe, ungakhetha ulimi ofisa ukulufunda.
Siphinde futhi sikunikeze iSingeniso se Ukucabanga Nekusasa ezilimini ezimbalwa amavolontiya eza ngaphambili ukuzokwakha. Zibhalwe ngezansi ngezinhlamvu zamagama.
Lesi sahluko sokuqala sethula ezinye zezihloko okukhulunywa ngazo encwadini. Inikeza umfundi ngasikhathi sinye umongo kanye nesisekelo sencwadi yonke. Ngenxa yalokhu, sinikeza ukuhunyushwa kwekhwalithi yomuntu kwesingeniso lapho sikwazi khona. Sithokozela kakhulu amavolontiya asize iThe Word Foundation ukwenza ukuhumusha kwalesi sahluko sokuqala kutholakale. Sicela uxhumane nathi uma ungathanda ukufaka isandla ekuhumusheni kwesingeniso kwezinye izilimi.
Deutsch: Einleitung von Denken und Bestimmung (IsiJalimane: isingeniso kuya Ukucabanga Nekusasa)
Esperanto: Enkonduko al Pensado kaj Destinado (Isi-Esperanto: Isingeniso ku Ukucabanga Nekusasa)
Nederlands: Inleiding tot Denken en Bestemming (Dutch: Isingeniso kuya Ukucabanga Nekusasa)
Русский: Введение в Мышление и судьба (IsiRashiya: Isingeniso ku Ukucabanga Nekusasa)
Eziningi zezihloko zizobonakala zingavamile. Ezinye zazo zingase zishaqise. Ungathola ukuthi bonke bakhuthaza ukucabangisisa. HW Percival